रास्कोटको नमुना बस्तीमा रिङरोड बन्ने – Newsrara
जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका ७ को नमुना बस्तीमा रिङरोड बन्ने भएको छ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र नगरपालिकाको सहयोगमा नगरपालिकाको वडा नं ७ मा पर्ने पुछ्छेगाउँदेखि वडा नं ६ को एककीकृत नमुना वस्तीमा जोड्ने रिङरोड बन्ने भएको हो ।
नगर उपप्रमुख मिमसरा वम र वडा र्न ६ का वडा अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रवक्त्ता टक्कबहादुर फर्सालले संयुक्त्त रुपमा रोडको शिलान्यास गरेका छन् । पहिलो वर्ष ५० लाखको लागतमा निर्माण हुन लागेको सो रिङरोडको आजैदेखि काम शुरु भएको उप प्रमुख बमले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार यो जिल्लाकै पहिलो र नमुना सडकको रुपमा लिएको छ । नगरपालिकाले पहिलो पटक वडा र्न ७ को पुछ्छेगाउँलाई नमुना बस्ती बनाउने निर्णय गरेकाले पहिलो प्रथामिकता सडकलाई दिएको बताइन् । क्रमश अन्य वडामा उत्पादन र भौगोलिकताका आधारमा केहि न केहि रुपमा नमुना बनाउँदै जाने पनि बताइन् । अहिले पनि नगरकै वडा नं ८ र ९ लाई फलफुल पकेट क्षेत्र, लेकाली भागमा स्वाउ जोन र औली भागहरुमा सुन्तला पकेट क्षेत्र बनाउने बताइन् ।
शिलान्यास कार्यक्रममा वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष टक्कबहादुर फर्सालले वडा नं. १ देखि ९ सम्मका सवै वडाहरुमा उत्पादन आधारमा उत्पादनमा आधारित पकेट क्षेत्र र भुगोलका आभारमा एकिकृत्र नमुना बस्ती निर्माणको तयारिमा रहेको बताए । वडा नं. ६ को वडालालाई जिल्लाकै उत्कृष्ट एकीकृत नमुना वस्ती बनाउने तयारी रहेको बताए । अहिले पनि यो सडक विदेशी मोडलमा रिङरोडको डिजाइन अनुसार बन्न लागेको बताए । ‘अहिले नगरका ९ वटै वडाहरुमा सडक पुगिसकेका छ । आवश्यकता अनुसार सडकको कालोपत्रे गर्ने र नमुना बस्तीमा रिङरोड निर्माण गर्न लागेका छौँ’।rajdhanidaily.com साभार